सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध ओली पक्ष पुनरावलोकनमा जाने « Drishti News – Nepalese News Portal
सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध ओली पक्ष पुनरावलोकनमा जाने
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ८ : २५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सांसद निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेको छ ।
अदालतको फैसला कानुन अनुसार नभएको भन्दै भ्याकेट दिने तयारी भइरहेको एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले जानकारी दिएका छन् । आन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जाने तयारी भइरहेको जानकारी दिंदै उनले यो फैसला संविधान र कानुन सम्मत नभएको बताए ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेशका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दबहादुर बुढालाई एमालेले गरेको कारबाहीविरुद्ध पार्टीले गरेको कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै चार जना सांसदलाई एमालेको दशौं राष्ट्रिय सम्मेलनमा आयोजक कमिटीले पार्टीबाट निलम्बन गरेको थियो । अदालतले त्यसरी कारबाही गर्ने अधिकार आयोजक कमिटीलाई नभएको फैसला गरेको छ ।
सेनाको नेतृत्व हस्तान्तरणबाट अरुले के सिक्ने ?
काठमाडौं । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आगामी २७ भदौदेखि अवकाश पाउँदैछन् । त्यसको करिब
हेड्लाइन्स् : १. कोरोना संक्रमणबाट थप ४६ जनाको मृत्यु, १० हजार ९ सय ४ जनामा
भक्तपुर । नेपाल मजदूर किसान पार्टीकाअध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले नेपालको चुरे क्षेत्रको बालुवा, ढुंगा, गिटी अधिकांश